गफ ! .....: माछा नमार्दाको कुरा
माछा नमार्दाको कुरा
चिँ मुसि चिँ
तेरो बाउ मेरो बाउ
माछ मार्न गए
माछ मारी ल्याए
हा !! हा !!
स्कुल जान सुरु गर्नु भन्दा अगाडी नै हामी केटाकेटी भेला भएर एकको हातमाथी अर्कोको हातले बुढी औँला र चोर औँलाले चिमोटेझैं समाएर यो गीत गाउँदै , माछा मारिन्छ भन्ने सिकेको थिएँ मैले ।
अलि ठुलो भएर म माछा मार्न सिपालु भएको थिएँ । बल्छि र लोथा मा गँड्यौला उनेर माछा मार्न जाँदा म निक्कै माछा पार्ने गर्थें । संगै माछा मार्न गएका साथीभाईहरु डाहाले भुत्तुक्कै हुँदा पनि मेरो बल्छीमा माछा पर्न छाड्दैनथियो र म उनिहरुलाई फुर्ति देखाउंदै भन्थें , ' म मीन राशी हुँ । राशीमै माछाको चिन्ह भएपछि माछा पर्दैन त ?' त्यसबेला सम्म त म माछाको गीत पनि अर्कै गाउने भईसकेको थिएं - माछी मारन हौ दाई हौ आजलाई चटनी माछी मारन ...........। घरमा माछा गन्हाउंछस् तँ भनेर सबैले छि भन्दा पनि त्यसबेला म माछा मार्न छोड्दैनथिएं । निक्कै ठुलो हुञ्जेलसम्म माछा मार्न भनेपछि हुरुक्कै हुन्थें म । मार्ने प्रक्रियामा फरक आयो तर माछा त मारिन्थ्यो नै । त्यस्तै गाउने / गुन्गुनाउने माछाका गीतहरु पनि फरक हुँदै गए - माछि मार्न जाउँ न दाजै कालापानीमा ............... । अझ माछा मार्ने प्रक्रियालाई नै प्रतिक बनाएर मैले यौटा गीत पनि लेखेको छु र आफैंले संगीत संयोजन पनि गरेको छु -
तिम्रो माया बल्छि रै'छ
मुस्कानको चारो थाप्यौ
लोभिएर उनिएछु म
जालहारीको जाल जस्तै
तिम्रो त्यो जाली मायामा
थाहै नपाई थुनिएछु म ।
आज यहाँ पनि माछा मार्न जाने चाँजो मिलाएको थिएँ । बिहान ११ बजे तिर घरबाट निस्किएर वाल मार्टमा एकदिनको लागी माछा मार्ने लाईसेन्स लिएं । हाम्रो देशमा माछा मार्ने बहानामा हामी मनपरी गरेर खोलानालाका माछा त के अन्य जीब जनावरकै अस्तित्व नष्ट गरेर छाड्छौं । कसैलाई माछा मार्ने लाईसेन्स चाहियोस न जलाशय जोगाउने कुनै नियम कानुन होस तर यहाँ नियम भनेको नियम नै हो नेपालमा चाहिंदैन थियो भनेर भएन । त्यसपछि वालमार्ट बाटै बल्छि किनें र लागें खोलातिर । साथमा यहिँको बासिन्दा थियो ब्रायन नाम गरेको साथी । खोलामा पुगेपछि ब्रायनलाई सिकाईमाग्नु पर्यो बल्छि कसरी थाप्ने ( चलाउने हो क्यारे हामी थाप्ने भन्थ्यौं पहिले ) भनेर । नेपालमा आफैं बाँसघारीमा गएर टाँगो काटेर बल्छि बनाउने गरेको यहाँको अत्याधुनिक बल्छि न पर्यो चलाउनै अप्ठ्यारो लाग्यो निक्कैबेर । बल्छि चलाउन जानेपछि माछा निक्कै समाउंछु झै गरेर अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो ठाउँतिर बल्छि हान्न ( हान्न पनि भनिन्छ क्यारे ) थालें । सुरुमा हामी सहरको नजिकैको खोलामा गएका थियौं त्याँहा प्रसस्तै सिल्भर सालमनहरु देखिन्थे तर मैले यौटा पनि मार्न जानिनं । अरु अरुले पनि त्यति पारेको देखिएन त्याँहा । धेरै माछाहरु देखिने ठाउँ , जहाँ ब्यारेज थियो नहर निकालीएको , मा बल्छि हान्न निषेध गरिएको थियो । अलि तलबाट खोलाको वारीपारी तार टाँगेर बल्छि खेल्न पाउने र नपाउने क्षेत्र छुट्याई एको थियो । निक्कैबेर कोसिस गर्दा पनि माछा मार्न नसके पछि हामीले अर्कै खोलामा जाने निर्णय लियौं र लगभग आधा घण्टाको ड्राईभमा अर्कै खोलामा गयौं त्याँहा धेरै मान्छेहरु बल्छि खेलिरहेका थिए । निक्कैबेर हामीले त्याँहा पनि कोसिस गर्यौ तर माछा परेन । अरु अरुले माछा पारेको रमिता हेरेर बसेपछि ब्रायनले धेरै माछा पर्ने ठाउँमा लैजान्छु तर त्याँहा माछा खान भालुपनि आउने गर्छ र कैले काँही मान्छेलाई पनि आक्रमण गर्छ , तँलाई डरलाग्छ कि लाग्दैन भन्न थाल्यो । भालुले आक्रमण नै गर्छ भनेपछि कताकता डर पनि लाग्यो तरपनि लु जाउँ न त भनेर अरु १ घण्टाको ड्राईभमा अर्कै खोलामा पुगियो ( यि सबै खोलाहरुको नाम चैं मैले याद गरिनँ है ) ।
बेलुकि ३ बजेतिर उक्त भालु आउने भनिएको खोलामा पुगेका थियौं हामी । मलाई भालु आई चैं दियोस तर आक्रमण गर्नै चैं नआओस भन्ने लागेको थियो तर साँझ ९ बजे सम्म माछा मार्दा पनि भालु आएन । ब्रायनले ३ वटा ठुल्ठुला किँग सालमन बल्छिमा पार्यो , मैले भने पट्टक्कै सकिनँ माछा पार्न । संग्लो पानीमा सालमनहरु खेल्दै गरेको प्रसस्तै देखिन्थ्यो त्याँहा पनि तर मार्न भने सकिनँ । माछा मार्ने कार्यक्रम ( मैले नमारे पनि ) सकेर फर्कँदा खोलामा आफ्नो बिरानो छुट्याउन नसक्ने गरेर अँध्यारोले पाईला टेकिसकेको थियो ।
हुनत माछा मार्ने यौटा बहाना मात्र न हो , हप्ताको एकदिन छुट्टी रमाईलो होस भन्ने चाहनाले नै धेरै काम गर्छ र रमाईलो पनि भयो र पनि माछा मार्न नसकेपछि अंत्यमा मनमनै भनें - यता अमेरिका आए देखि म मीन राशी नै रहिनं । राशी नै बदलिएर Gemini भएपछि के पर्थ्यो त माछा ?
( यो गन्थन लेख्दा माछा मार्दाको कुरा भनेर सुरु गरेको थिएँ तर अंत्यमा लाग्यो माछै नमारे पछि कसरि मार्दाको कुरा भन्नु त्यसैले माछा नमार्दाको कुरा भनेर शिर्षक लेखेको हुँ । )
Posted by दीपक जडित at 3:30 AM
तपाईंले माछा बल्छिमा नपारेपनि खुबै राम्रो गीत लेख्नु भएछ। अनि माछाको बारेमा सुनेको अरु गीत पनि राख्नु भो। मैले पनि सुनेको थिए एउटा गीत। गाउमा माछा पोलेर खादाखेरि दाइ (काकाको छोरा)ले गाउदै गरेको:
तेरो बाउ मेरो बाउ माछा मर्न गाको
बल्ल बल्ल एउटा माछा घरमा ल्याको
तलाइ आधा मलाइ आधा बराबारि भाको
शिर्षक चाहि माछा नमार्दा हैन होला। माछा त मार्न खोजेकै हो नि। अरुले मार् भन्दा पनि नमारेको हैन। बरु मार्न खोज्दखोज्दै पनि नमरेको चाहि होजस्तो लग्यो। त्यसैले माछा नमर्दा वा नमरेको कुरो होकि? आनि नि तपाइको राशिको दोष हैन कि त्यो माछा सारै बाठो भाको होला।
निक्कै रमाईलो रहेछ तपाईको यो माछा नमार्दाको कुरा।
तर यौटा कुरा चाहि बुझ्न सकिएन, नेपालमा बस्दा त्यस्तरी बल्छिमा माछा पर्ने मान्छे अमेरिका पुगेपछि किन यस्तो खालि हात?
मलाई लाग्छ यसपाला तपाईले पक्कै पनि वालमार्ट बाटै बल्छिमा हाल्ने "खानेकुरा" पनि किन्नु भयो होला, नेपालको 'गँड्यौला' को जादु त्यसमा पक्कै पनि रहेन होला!
मेरो बोलीमा लोली मिलाएर माछाको गीत थप्नुभएकोमा साह्रै खुशी लाग्यो । शिर्षकको कुरा चैं माछा मार्दाकै हुनुपर्ने हो तर खै मार्न नसकेर नै नमार्दाको कुरा लेखें मैले त अनि राशीको कारणले त पहिले नेपालमा हुँदा पनि माछा मरेको हैन हौ कैलाश जी , यसो ब्लगमा २ लाईन थपिन्छ भनेर कुरा जोडेको मात्र है । नेपालमा साथीभाईलाई भने फुर्ती दिन्थें है राशीमै माछा छ भनेर ।
दिलीपजी चारो वालमार्टबाटै किनेको थिएं तर अरुले वालमार्टकै चारोले पनि मारे माछा , मैले अलि काईदा पुर्याउन नसकेर हो कि खै के हो , प्रतिक्रियाको निंती कैलाशजी र दिलीपजीलाई धन्यवाद !
आज त झन गजल : घर न घाटको भईयो
गजल : कसम हरायो आज
कविता : म साँच्चै एक्लो भएछु
गजल : बोक्रो हेर्दा
त्राही त्राही तराई ।
कविता : ए ! छोरा , आउ अब त फर्केर
छोटो चर्चाको साथमा गजल : कत्तिको पुरा गर्छौ
गजल : नयाँ नेपाल
कविता : म भित्रको मेरो नेपाल
गजल : कनिका हुन्छन
प्रतिक्रिया लेख्दाको कुरा
कविता : शब्दहरु अचेल